Spotify waxay gaadhay 158 milyan oo macaamiil ah oo bixiya lacagta | Waxaan ka socdaa mac
Intii lagu gudajiray rubuca koowaad ee 2020, Wadarta macaamiisha lacagta la siiyay ee Spotify ayaa koray ilaa 158 milyan, taasoo 21% ka badan isla muddadaas sanadkii ka horreeyay. Si kastaba ha noqotee, waxay ka digeysaa hubin la'aanta ballaarintiisa mustaqbalka dalal ay ka mid yihiin Hindiya, oo ka mid ah suuqyadii ugu dambeeyay ee ay gaartay iyo halka ay ku soo kordhayaan kiisaska COVID-19, marka ma saadaalin karaan sida ay noqon doonto. bilaha soo socda.
Celceliska dakhliga qofkasta oo isticmaala wuxuu hoos udhacay 7% sanadkii ilaa 4,12 euro. Shirkadda ayaa u aaneyneysa hoos u dhaca qiimaha hoose ee suuqyada cusub iyo qorshooyinka dhimista ee loogu talagalay in lagu soo jiito macaamiisha cusub, taas oo ah wax ay jaan goyn doonto bilaha soo socda. iyadoo lagu dhawaaqay kororka kootada ee dalalka Yurub qaarkood.
Wadarta Dakhliga Diiwangelinta Spotify waxay ku kordheen 14%, ilaa 1.930 million euro. Isticmaalka isticmaale kasta ayaa ku koray gobollada horumaray halka gobollada soo koraya "ay ka muuqdeen astaamo horumar ah, laakiin waxay ka hooseeyeen heerarka ka hor-COVID."
In kasta oo Apple Music uu yahay adeegga labaad ee ugu caansan ee soo dejinta muusigga ka dib Spotify, ama ugu yaraan waa inay noqotaa haddii tirooyinka koritaanka ee saadaaliyay falanqeeyayaasha qaarkood la xaqiijiyo in Waxay bartilmaameedsanayaan ilaa 70 milyan oo macaamiil ah maanta.
Waa in la xusuusnaado tan iyo bishii Luulyo 2019, markii Apple ay ku dhawaaqday taas gaadhay 60 milyan oo macaamiil ah, shirkaddu kamay hadlin arintan mar labaad.
Amazon, dhinaceeda, waxaa lagu dhawaaqay horaantii 2020, isku darista dhammaan qaababka ay muusiggu bixiyaan (rukumo aan lahayn xayeysiis, dib loogu ciyaaro xayeysiis iyo Amazon Prime Music) oo qulqulaya, lahaa 55 milyan oo isticmaale Tirada ay tahay inay korodho sanadkii la soo dhaafay in kasta oo shirkadda Jeff Bezos aysan dib u cusbooneysiin tiradaas mar kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Shirkadda Spotify waxay gaaraysaa 158 milyan oo macaamiil ah oo bixiya
Sonos Roam, oo ah afhayeen la qaadan karo oo aan ku tanaasulin tayada codka iyo awoodda